'नयाँ शक्तिको बीउ रोप्दा केही भुस पनि रोपिएछ' - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
‘नयाँ शक्तिको बीउ रोप्दा केही भुस पनि रोपिएछ’
काठमाडाैँ । नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले नयाँ शक्ति गठन गर्दा बीउमा भुस पनि मिसिएको बताएका छन्। बुधबार पार्टी स्थापना दिवसका अवशरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै डा. भट्टराईले पुराना पार्टीलाई मसानघाटमा पु-याउन नयाँ शक्ति गठन गरिएको दाबी गरे।
पार्टी छोडेर जाने नेताहरुहरुप्रति लक्षित गर्दै उनले भने, ‘बीउ रोप्न खोज्दा केही केही भुस पनि रोपिएछ। केही साथीहरू बाबुरामसँग लागेपछि छिटो माथी पुगिन्छ भनेर सोच्नुभएछ, त्यस्तो भएन र उहाँहरुले पार्टी छोडेर जनुभयो।’
नवगठित नेकपाले कम्युनिष्ट पार्टीको खोल ओढेर जनता झुक्याएको भट्टराईले आरोप लगाए। डा. भट्टराईले ब्राकेट वाला नयाँ पार्टी मा धेरैको भ्रम छ भन्दै नेकपाको भ्रममा नपर्न पनि उनले कार्यकर्ताहरुसँग आग्रह गरे। ‘पिके र केपीले ब्राकेट वाला पार्टी गठन गरेका छन्। त्यसमा केही साथीहरु गुम्सिनु भएको छ उहाँहरु बिस्तारै नयाँ शक्तिमा आउने सोच बनाउदै हुनुहुन्छ’ उनले भने।
उनले देशको भविष्य युवशक्तिको हातमा छ भन्दै युवाहरुलाई देश निर्माणको अभियानमा लामबद्ध हुन पनि आग्रह गरे। उनले देश समृद्ध बनाउने हो भने शिक्षा र स्वास्थ्यमा रहेको सिन्डिकेट हटाउनुपर्ने बताए। शिक्षा र स्वास्थ्यमा रहेको निजीकरण र व्यापारिकरण समृद्धिको बाधक रहेको उनको भनाई थियो।
भट्टराईले अहिले सिंहदरबारको अधिकार तलसम्म पुगेको नभई सिंहदरबारको भ्रष्टाचार स्थानीय तहसम्म पुगेको टिप्पणी गरे। यस्तै, उनले स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था मिलाउन र विदेशमा बसेका लाखौं युवाहरुलाई विदेशबाटै मतदानको व्यवस्था मिलाउन पनि आग्रह गरे।